Mario Kart Tour wuxuu noqday Nintendo-kii ugu weynaa ee mobilada laga helo | Wararka IPhone
Toddobaad uun ka hor Nintendo wuxuu go'aansaday inuu soo bandhigo mid ka mid ah hitskeeda weyn ee caalamiga ah, Mario Kart, taleefanka gacanta. Waa in la ogaadaa in ciyaartan fiidiyowga loogu talagalay taleefannada casriga ah Nintendo ay leedahay qaab gaar ah oo wax loo sameeyo, tusaale waa isla Mario Kart kaas oo si toos ah loogu ciyaaro taasna way jeceshahay dad badan, laakiin waxay keenaysaa cabashooyinka kuwa ugu nadiifsan ee saga. Noqo sida ay noqon karto, Mario Kart wuxuu noqday midkii ugu guuleysiga badnaa ee Nintendo loogu talagalay taleefannada gacanta oo leh ku dhowaad boqol milyan oo soo degsasho ah, ma jeceshahay ciyaarta?
More si gaar ah ciyaarta Waxay heshay 36,5 milyan oo soo degsasho ah oo ku saabsan qalabka iOS (iPhone, iPad iyo iPod Touch), dhinaceedana, 53,5 milyan oo laga soo dejistay qalabka ku shaqeeya Android. Waxaa laga yaabaa inaan filayay soo degsiimo badan oo ku saabsan Android iyadoo tixgelinaysa saamigeeda suuqa ee muhiimka ah. Si kastaba ha noqotee, soo dejintu waxay sii socotaa inay dhacdo sidaas awgeed caqabadda 100 milyan oo soo degsasho ah ayaa laga dhaafi doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Tani waxay gebi ahaanba nadiifineysaa Isgoyska Xayawaanka: Xerada Jeebka oo gaadhay qiyaastii 14,3 milyan oo soo dejin ah usbuucii ugu horreeyay, oo ay ku jiraan Super Mario Run oo joogtay 13 milyan oo soo degsiimo iyo hubaal geesiyaasha Astaamaha Dabka, oo istaagay. 8,1 milyan oo soo degsiimo ah.
Marka laga hadlayo waxtarka, arintu sidaa uma badna, waana in Mario Kart Tour uu helay 12,7 milyan oo doolar usbuuca ugu horeeya, kana dambeeya Super Mario Run oo gaadhay 16,7 milyan oo doolar aadna uga fog Halyeeyada Astaanta Fire oo kor u dhaaftay $ 28 milyan. On macruufka, ciyaarta fiidiyowga wuxuu helayaa celcelis ahaan $ 0,26 halkii soo degsiimo ah, halka Android, sida caadiga ah, ay soo saarto oo keliya celcelis ahaan faa iidooyin kasta oo ah $ 0,06 farqiga muhiimka ah ee ina xusuusinaya sababta ay horumariyayaashu dadaal badan ugu galeen barnaamijyadooda macruufka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Mario Kart Tour wuxuu noqdaa kii ugu weynaa ee Nintendo ku dhaca mobilka